Soosaarayaasha Qalabka Infrared - Shiinaha Soosaarayaasha Qalabka Infrared, Alaab-qeybiyeyaal
DIEN TECH waxay bixisaa waxyaabo infrared kaladuwan oo leh iskumid heer sare ah, iska caabinta nabaad-guurka acid-base iyo waxqabadka kiimikada ee xasiloon ayaa ah kristantarrada indhaha ee aadka u muhiimka ah ee lagu dabaqay IR-ga, oo ay kujiraan ZnSe iyo ZnS. Sidoo kale ka shaqeynta qalabkan sida ku cad sawirka iyo xuduudaha farsamada.
Silicon waa halbeegga loo yaqaan 'mono crystal' oo ugu horrayn loo adeegsado isku-xidha kaaliyaha oo aan nuugi karin 1.2μm illaa 6μm gobollada IR. Halkan waxaa loo adeegsadaa inay tahay qayb ka mid ah indhaha indhaha codsiyada gobolka IR.
Calcium Fluoride waxay leedahay codsi ballaaran oo loo yaqaan 'IR' oo loo yaqaan 'spectrumpic CaF'2 daaqadaha, CaF2 prisms iyo CaF2 muraayadaha indhaha Gaar ahaan fasalada saafiga ah ee Kaalshiyamka Fluoride (CaF2) ka hel codsi waxtar leh UV iyo daaqadaha leysarka UV Excimer. Kaalshiyamka Fluoride (CAF2) waxaa la heli karaa iyadoo lagu duubay 'Europium' oo ah gamma-ray scintillator waana ka adag yahay Barium Fluoride.
ZnS waa kareemooyin muraayadaha indhaha oo aad u muhiim ah oo lagu dabaqay wareejinta IR. Soo gudbinta kala duwan ee CVD ZnS waa 8um-14um, gudbinta sare, nuugitaan hoose, ZnS oo leh heerar kala duwan iyadoo la adeegsanayo kuleylinta iwm Farsamooyinka cadaadiska durugsan ayaa hagaajiyay gudbinta IR iyo baaxadda muuqata.
ZnSe waa nooc ka mid ah huruudda iyo hufnaanta maaddada mulit-cystal, cabbirka walxaha crystalline wuxuu ku saabsan yahay 70um, gudbinta kala duwan ee laga bilaabo 0.6-21um waa xulasho aad u fiican oo loogu talagalay noocyo kala duwan oo codsiyo IR ah oo ay ku jiraan nidaamyada leysarka CO2 ee sarreeya.